I-App.Giorgio - Ikhaya leholide "Emthunzini wamaphayini" - I-Airbnb
I-App.Giorgio - Ikhaya leholide "Emthunzini wamaphayini"
Grosio, Lombardia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Giorgio
U-Giorgio Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lisendaweni yomlando yaseGrosio, idolobha elijabulisayo e-Alta Valtellina. Isikhundla sayo esihle kakhulu sikuvumela ukuthi ufinyelele kalula ezindaweni ezikhanga izivakashi ezinkulu ezihlanganisa iBormio, iTirano, iMortirolo neStelvio.
Umnyango ubheke igumbi lokuhlala elikhulu elinemibhede emibili yosofa kanye neziko eliqinisekisayo lamatshe. Kusukela emhubheni ungafinyelela amakamelo amabili azimele kanye nekhishi, umsebenzi oyigugu owenziwe ngezandla ngokhuni.
Indawo yokuhlala itholakala ngokuphelele ezivakashini zethu futhi ihlelelwe ukuvumela ukuphumula nokuphumula, ngenxa yendawo yokuhlala enethezekile, indawo yokulala ehlukene, igumbi lokugezela lokwamukela kanye nekhishi elihlomele ukuhlela ukudla kwakho.
IGrosio ingelinye lamadolobhana adume kakhulu futhi amadala ase-Valtellina engenhla, ejwayele ukuvama kusukela ezikhathini zangaphambi komlando. Imidwebo yetshe eliyigugu ye-Rupe Magna inganconywa eduze nezinqaba ezimbili zenkathi ephakathi eziqaphe idolobha. Sincoma ukuhamba emigwaqweni ephawulekayo yesikhungo somlando, lapho ungaphefumula khona isiko elisahambisana nokuphila kwansuku zonke.
Io e mia moglie con i nostri nipoti Mattia e Michela gestiamo la casa vacanze All’ombra dei Pini! Ogni cliente per noi è speciale, la soddisfazione e la gioia più grande è vederli andar via felici dopo il loro soggiorno da noi!
Sihlale sitholakala nganoma imiphi imibuzo nge-e-mail, i-sms, i-whatsapp kanye nezingcingo. Silandele ku-Instagram casavacanze_allombradeipini
Silungele noma yiluphi uhlobo losizo nolwazi.
Sicela uzizwe ukhululekile ukusithinta uma unemibuzo.
Silandele ku-Instagram casavacanze_allombradeipini
Silungele noma yiluphi uhl…
UGiorgio Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CIR: 014033-CNI-00012